Gabaajeewwanii fi walmakinsa qubee LibreOffice hin barbaadne ofumaan sirreessuuf murteessi.
Quxaaleen hiiktu qindaa'ina afaan ammee irratti hundaa'a. Yoo barbaadde, qindaa'ina afaan fi jijjiiruu ni dandeessa, afaan garagara Bakka bu'iinsaa fi quxaalee keessaa sanduuqa afaanif.
Gabaajeewwan (no subsequent capital)
Gabaajee tuqaadhaan hordofamu barreessi, ittaansuudhaan Haaraa cuqaasi. Kunis LibreOffice ofumaan qubee jalqabaa jecha tuqaan booda dhuma gabaa jetti dhufu akka qubee guuddaa hin taanee dhoowwaa.
Gabaajeewwan ofumaan hisirroofne tarreessa. Maalima fili ittiansuudhaan Haqi cuqaasi.
Jechoota Qubee guguddaa Qubdura Lama waliin
Jecha ykn gabaajee qubee gurgurddattin jalqabu kan LibreOffice qubdura qubee guguddaa tokkootti jijjiiruu hin barbaadne barreessa. Fakkenyaaf, LibreOffice kompitara Matayyaa dhaagara kompitara matayyaatti akka hin jijjiramne ittisuuf PC galchi.
Jechoota ykn gabaajeewwan qabdura lamaan jalqabanii qubee guguddaa ofiin hin sirroofne tarreessa. Jechoonni marri kan qubeewwan guguddaadhaan jalqaban dirree keessatti tarreeffamaniiru. Maalima tarree irraa haquuf, maalima fili, ittaansuudhaan Haqi cuqaasi.
Galfata ammee gara tarree quxaaleetti ida'a.
Gabaajeewwan ykn jechoota qube guguddoo jalqabu tarree quxaa keetti walqaxaamuru ofumaan ida'a. Amali kun yoo dirqallii Qubee GUguddaa Qubduraa LAMa sirreessuu ykn dirqaaallii qubee jalqaba hima kamuuGuddisuu tarja [T] caancalaa Dirqaalee qaaqa kanaa keessatti filaman qofa dalaga.
Title is: Quxaala